Ama-movie ne-Adriano Celentano: uhlu ifilimu bungenxa umlingisi Italy
Lokhu-Italian ebukekayo ngilinqobile lonke elaseYurophu, kodwa futhi kakhulu uyakuthanda eRussia nakwamanye amazwe ayengaphansi kweSoviet Union, lapho izilaleli ngokuvamile ajwayelekile kuphela kanye edume kunazo imisebenzi yakhe, ezifana amahlaya "lovestruck", "umpetha", "Bingo Bongo" futhi ubugebengu ahlekisayo ifilimu "Bluff". Kodwa cinematic yakhe isebenza kakhulu.
Ngezindlela eziningi izenzo hhayi kuphela njengoba kumdlali kodwa futhi njengoba umqondisi, umbhali wezingoma. Ama-movie ne-Adriano Celentano, uhlu okuyinto abekwe ngezansi, esehlanganise iminyaka engaphezu kwengu-30 ekuphileni umlingisi.
Bambalwa abantu bazi ukuthi u-Adriano wakhulela emkhayeni ompofu, lapho yena waba ingane yesihlanu. Futhi uma kwakungekhona yisikhohliso nolaka, ithalente kanye nomsebenzi onzima, kungaba kumklami ezinhle kakhulu. Kodwa isiphetho decreed ngenye indlela, futhi umfana abanamakhono abavela Milan, inkanuko uyakuthanda umculo, ikakhulukazi rock 'n' roll, waqala umsebenzi wakhe njengoba kumbhali futhi umculi zezingoma ezikude 1954. Ekuqaleni, yena waba ilungu "Abafana Rock" futhi nabo kudlalwa emikhosini, futhi kamuva igxile umsebenzi wakhe solo.
Kakade ngo-December 1961, u-Adriano esungulwe inkampani yakhe irekhodi ngokuthi "Clan Celentano" owanikhipha ndawonye abangani bazo abanazo. abantu Creative ayikwazanga ukuthola esidlule ebhayisikobho, futhi wazama isandla sakhe ensimini entsha kakade ngo-1959. Ekuqaleni, wayehlanganyela ishaye i izindima encane zomculo. Celentano wayevame ukudlala yedwa, kodwa oyibamba yakhe ithalente yaqashelwa, futhi kungakabiphi wayeseya wathola indima athandwayo isihloko. Umculo wahlala uthando lwakhe main, okuyinto akazange akuvimbele ukukhandwa Italian isuswe ngonyaka okungenani ngento eyodwa, futhi ngisho izigcawu ezimbili. Lokhu kwaqhubeka kwaze kwaba ngo-1992, kuze kube umlingisi akayekiwe ephuma movie, wachaza isinyathelo sakhe bakhathale futhi yokuntuleka iziphakamiso ezinhle. umsebenzi Musical, yena ngempumelelo uyaqhubeka kuze kube yilolu suku.
Umsebenzi wokuqala ebhayisikobho
amafilimu kwangaphambilini Adriano Celentano, uhlu:
1959 - "Guys futhi jukebox", "Wozani, uJohnny, hamba!".
1960 - "The jukebox ekhala lothando," "izimfamona ezimelene we Dokha", "Sweet Life".
1963 - "Uhlobo eziyinqaba" (ngesikhathi ukuqopha wale movie, umlingisi wahlangana uthando wokuphila kwakhe nomkakhe esizayo Claudia Mori).
Zonke lezi opholile Celentano empeleni kudlalwa yena, njengoba iningi labo - umculo. Kuze 1969, inkanyezi e ngeqhaza ezincane episodic.
impumelelo Okuqala umsebenzi ukwakheka
Ngo-1969, i- umlingisi Italian lawela indima Starring movie comedy "Serafino" okuyinto ngempumelelo kudlalwa angadle ngabuhle obutheni, kodwa umlimi omuhle, kunalokho ngilinqobile baxgeki ngubani zingaphezu ngokufudumele ngebhayisikobho sisonke sifisa umlingisi ngokukhethekile. Le phrojekthi elilandelako godu waba yimpumelelo. comedy satirical "The History of Uthando Imimese" ngo-1971 futhi balethwa labashadene labaseminyakeni luhlaka olulodwa. Celentano Ubulokhu uthuthuka kule mkhakha futhi wathatha ithuba uzame bazibangele uhlobo engavamile - idrama. Umlingane Osebenzelana Naye u-Adriano ku isethi ifilimu "White, Red futhi ..." wayengekho Sofi Loren. Kuze kube manje, indima iCommunist Annibale ingenye the best Filmography umlingisi. Ngo-1973, kwafika ezintathu nje amafilimu iqhaza Celentano:
"Ngemva kwezinsuku ezinhlanu."
"Ngaphansi isibonakaliso esithile."
"I yizicukuthwane Venetian ngelika imbongolo ezimthende."
Le filimu "The Bluff" 1976 livelele lezi imidwebo. Ukuze indima yakhe uFeliksi kule ahlekisayo ubugebengu Celentano iwine umklomelo umlingisi engcono.
Kukholakala ukuthi ngemva "Bluff" waqala udumo isiqongo uphoqe njengoba kumdlali Adriano Celentano. Kusukela ngo-1977, waphuma amabili, amathathu noma amane amafilimu ngonyaka:
1977 - "Ngisindise, yena ongithandayo" (Italy: "Enye ingxenye esibhakabhakeni."), "Paparazzi Unlucky."
1978 - "uMalume Adolf, wethiwa Fuehrer," "Velvet Hands".
1980 - "I Ukudambisa of the Shrew," "Yilokho Hand", "uwayehlalise", "uMgqibelo, iSonto nangoLwesihlanu".
Ipheya Adriano Celentano futhi Ornella Muti ngakho organically wabheka Uhlaka ithandiwe yizilaleli, ukuthi duo oqondisa Castellano & Pipolo waphinda wanquma ukuletha umoya izinkanyezi esithombeni, ukuze kuqinisekiswe ekuphumeleleni kwalo msebenzi omusha. Nokho, isithombe elilandelayo - "ziyahlanya Othandweni 'ngo-1981 - kuyinto Remake of" Roman Holiday "futhi akahlangene encazelweni ne movie" The Ukudambisa of the Shrew. " Ngawo lowo nyaka waphuma futhi "Ace" futhi ngemva konyaka - "Bingo Bongo".
Ukuphela indlela cinematic
Ngemva uchungechunge amaphrojekthi yimpumelelo kumnandi umsebenzi umlingisi kancane kancane zabhuntsha. Ngakho imidwebo ekhaliphile yimpumelelo ayisekho ukuhamba. Amafilimu akamuva ne-Adriano Celentano (uhlu iminyaka eyishumi):
"Grand Hotel" Excelsior ".
"Izici ezikhethekile: Hunk ehlulekayo ukumelana nayo."
"Muhle sibi ukwedlula mina."
"Jackpot", 1992 kwaba Celentano yokugcina ifilimu. Tape kwahluleka ngokudabukisayo ehhovisi ibhokisi, bengazamukeliswanga eshaywa futhi wachitha ingxenye imali yakhe.
Wayo yonke imisebenzi
Ngo umsebenzi inkanyezi Italian has a amafilimu ekhethekile lapho athatha khona isinyathelo hhayi kuphela njengoba kumdlali kodwa wazibonakalisa njengoba abanamakhono umqondisi, umbhali, umqambi futhi umkhiqizi.
amafilimu Oyingqopha-mlando nge-Adriano Celentano, uhlu:
Ngo-1965 wenza DEBUT yakhe njengomqondisi, nenomakhanya nomkakhe the comedy "Superograblenie eMilan."
1974 - mlando emsebenzini Italian sika, ngoba eyabo impumelelo - rock zomculo "Yuppi Du" (ka-French futhi Russian of "Shesha, kuze unkosikazi ibuyise") - lapho inkanyezi, kwaba umqondisi, umkhiqizi, umbhali iskripthi futhi umqambi, bambamba umndeni wakhe - nomkakhe kanye nabantwana bakhe.
comedy Musical ka 1978 "Madman Japp" Celentano uthanda ukubiza "ifilimu yami", ngoba isithombe kwakhe esiqukethe okushiwo ukuphila we umculi umlingisi. Akumangazi ukuthi lidlale Claudia Mori.
Enye ukudalwa Ngohlelo umndeni Celentano / Mori - kumnandi zomculo "Joan Lui", okuyinto ubhekwa ukwehluleka kwazo zonke izinkanyezi amaphrojekthi Italy. izingqikithi sezenkolo, lwesigameko eziyinqaba, icebo engaqondakali akahlatshwa umxhwele noma a baxgeki noma ababukeli.
Comedy mayelana lomshado: ezintathu ezihamba phambili
"Hakuna Matata" - lokho futhi kanjani ukuhumusha?
Filipp Avdeev: Biography nama-movie
Andrei Proshkin: Biography nama-movie
Kim Kardashian: ukuphakama, isisindo, futhi amaqiniso athakazelisayo
Boltneva Maria Andreevna, actress: Biography, empilweni yakho, ama-movie
Lapho kumephu emfuleni Sukhona? Lapho luyaphi futhi lapho Sukhona uwa?
Umqambi Norwegian Edvard Grieg: Biography (isifinyezo)
Indlela yokukhokha ngaleso exchange zabasebenzi? Iyini inzuzo maphakathi umsebenzi?
Mordovia republic kuhlanganiswe Museum lwazi lendawo. I. D. Voronin: ikheli, incazelo
Edirne Palace: umlando esigodlweni nezithombe
Statesman Aman Tuleyev: Biography, umndeni kanye nempilo yakho